Iyo nyowani vhezheni yeMesa 19.2.0 madhiraivha aburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeMesa 19.2.0 madhiraivha aburitswa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yemahara OpenGL uye Vulkan kuitiswa, Tafura 19.2.0, iyi iri yekutanga vhezheni kubva kubazi reTafura 19.2.0 ine nyika yekuyedza, sekunge mushure mekugadzikana kwekupedzisira kwekodhi, yakagadzika vhezheni 19.2.1 ichaburitswa.
Kune avo vasingazive nezvevatyairi MESA ndiyo yakavhurwa sosi yeLinux software madhiraivha anowanikwa e AMD, NVIDIA uye Intel Hardware. Iyo Mesa chirongwa chakatanga seyakavhurika sosi yekumisikidza yeiyo OpenGL kududzirwa (sisitimu yekupa inowirirana 3D mifananidzo).
Kwemakore, chirongwa ichi chakakura kuita mamwe maAPI, inosanganisira OpenGL ES (shanduro 1, 2, 3), OpenCL, OpenMAX, VDPAU, VA API, XvMC, uye Vulkan.
A akasiyana ma controllers zvezvishandiso inobvumira Mesa maraibhurari kuti ishandiswe munzvimbo zhinji dzakasiyana, kubva kune software yekuteedzera kupedzisa Hardware kumhanyisa kwemaGPU emazuva ano.
Mesa inoshandisa mutengesi-yakazvimirira dudziro dura pakati pegrafiki API senge OpenGL nemadhiraivha egirafu mune kernel yeiyo inoshanda sisitimu.
Pamusoro pekushandisa kwe3D, semitambo, maseva emifananidzo anoshandisa OpenGL / EGL mafoni kuti abudise mufananidzo pachiratidziri
Zvinyorwa zvitsva zveTafura 19.2.0
Iyi vhezheni itsva yeMesa 19.2 inopa yakazara OpenGL 4.5 rutsigiro rwevatongi i965, radeonsi uye nvc0, Vulkan 1.1 inotsigira makadhi eIntel uye AMD, pamwe nekutsigira chiyero OpenGL 4.6 yemakadhi eIntel.
Vanotyairi (i965, iris) yeIntel mifananidzo yemakadhi (gen7+) ipa rutsigiro ruzere rwe OpenGL 4.6 uye mutauro wekutsanangura iyo GLSL 4.60 mimvuri.
Usati wapa rutsigiro rweOpenGL 4.6 mu radeonsi (AMD) uye nvc0 (NVIDIA) madhiraivha, inosara kuita iyo GL_ARB_gl_spirv uye GL_ARB_spirv_extensions extensions, iyo yakawedzerwa kune i965 mutyairi muna Nyamavhuvhu.
Kuwedzeredzwa kweanoshanda eiyo nyowani Iris mutungamiriri weIntel GPUs akaenderera, ayo maererano nekugona kwayo akapotsa asvika parity pamwe neiyo i965 controller.
Iyo Iris mutyairi yakavakirwa pane iyo Gallium3D dhizaini, iyo inounza ndangariro manejimendi mabasa kune mutyairi weDRI muLinux kernel uye inopa kunze-kwe-kwebhokisi hutano tracker nerutsigiro rwezvinoburitsa chinhu shandisazve cache.
Mutungamiriri anotsigira chete maGPU akavakirwa paGen8 + microarchitecture (Broadwell, Skylake) ine HD, UHD uye Iris GPUs.
Muchiitiko chevatongi uye RADV Radeon SI mune iyi vhezheni itsva yeMesa 19.2.0 AMD Navi 10 GPU rutsigiro rwakawedzerwa (Radeon RX 5700) uye rutsigiro rwekutanga rweNavi 14.
Iye mutyairi weRadeonSI akawedzerawo ramangwana APU Renoir rutsigiro (Zen 2 c GPU Navi) uye zvishoma Arcturus (nepo ingori computational kugona uye VCN 2.5 vhidhiyo yekumisikidza injini, isina 3D).
MuGallium3D R600 madhiraivha emamwe makadhi ekare eADD (HD 5800/6900) yakapihwa rutsigiro rweOpenGL 4.5.
Zvakare zvakare mukuburitswa uku Ichangowedzerwa OpenGL yekuwedzeredza inosimbiswa:
GL_ARB_post_depth_coverage ye radeonsi (Navi) mutyairi
GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture yeetnaviv controller (inoenderana neSEAMLESS_CUBE_MAP paGPU)
GL_EXT_shader_image_load_store yeradeonsi mutyairi (ane LLVM 10+)
GL_EXT_shader_samples_identical yeis iris uye radeonsi madhiraivha (kana uchishandisa NIR)
GL_EXT_texture_shadow_lod yeI965 uye iris madhiraivha
Zvakare nekuwedzeredzwa kune Vulkan RADV mutyairi (yemakadhi eADD):
Uye kuwedzerwa kune ANV Vulkan mutyairi (wemakadhi eIntel):
Yeimwe shanduko dzakaziviswa mune iyi vhezheni itsva yevatyairi:
YeRadeonSI yakaunza nyowani nguva yekumhanya linker: rtld;
Kugadziriswa kwekuita kweRADV uye vatyairi veVirgl
Iyo Panfrost mutyairi weGPUs yakavakirwa paMidgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) uye Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x) microarchitectures anoshandiswa mumidziyo mizhinji ine maARM processors akawedzerwa. Unyanzvi hwekugona zvino hwakwanira kuti GNOME Shell ishande
Wakawedzera kuwedzera kweEGL kwakakurudzirwa naNVIDIA EGL_EXT_platform_device, iyo inobvumira kutanga kweEGL pasina kuwana iyo yakanangana nedhiza-API
Chekupedzisira, mirira iyi vhezheni itsva yevatyairi veMesa kuti itange kugoverwa mukuparadzirwa kukuru kweLinux mumazuva mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo nyowani vhezheni yeMesa 19.2.0 madhiraivha aburitswa
Maitiro ekumhanyisa echinyakare MS-DOS mitambo yemavhidhiyo pane Steam Tamba
Kuchena kwakatotanga nekutakura kwekutanga batch yeLibrem 5